श्रेयालाई वान्स मोरको ओइरो
श्रेयालाई वान्स मोरको ओइरो
शुक्रवार ०९ आषाढ, २०७४ | कला र साहित्य
गायिका श्रेया सोताङलाई कहिले काहि लाग्छ आफनो जीवनका हरघडीमा सांगितक लय भएका बाबुआमा(उदय—मलिना) नभईदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? सायद श्रेया सोताङ एक चलनचल्ती गायिका नबनेर कतै शिक्षीका चिनारीमा चक—डस्टर मै रमाईरहेकी हुिन्थन् की ?
तर त्यसो भएन । युनिलिभरको आयोजनमा देशैभर चलिरहेको सुपरस्टार धमाका उत्सवमध्ये धादिङ, सिन्धुली,र उदयपुर जिल्लाका भित्री गाउठाउमा पुगेर गीत गाउदा श्रेयाले यसपटक थाहा पाइन एउटी शिक्षीका होस अथवा गायिका पहिला आफु बसेको समाज बुझियोस गाउठाउ बुझन पाईयोस। यसपटक सिन्धुलीको पान्तले भन्ने ठाउमा पुगेर गाएकी थिए । श्रेया गफमा मग्न थिइन । त्यो ठाउमा अझै बिजुली पुगेको रहेन्छ । तैपनि गीत—संगितको प्रभाव भने निकै लोभ लाग्दो गरी फैलीएको रहेछ । म जस्तो नया गायिकालाई पनि सुन्न चाहनेहरु र चिन्न खोज्नेहरु निकै पाए । अब अर्काे चरणमा भने सांगितिक टुर लिएर श्रेया रुकुम ,रोल्पातिर जाने योजना बनाइरहेकी छिन ।
म जस्तो नया गायिकालाई पनि सुन्न चाहनेहरु र चिन्न खोज्नेहरु निकै पाए ।
जति नै नया भने पनि श्रेया नेपाली गीत—संगितका दुनियामा छाएको एकदशक हुनै लागेको छ । यस बीचमा दुई एल्बम निकालेकी श्रेया आफनो पप—लोक र आधुनिक — क्लासिकल बेसका कारण पनि स्वरहरुको हुलमा भिन्न बनिसकेकी छिन । यसमा पनि अहिले चलेको “अलिअलि भए पनि माया देउ मलाई” र “कहा कहा दुख्छ प्रिय” जस्ता गितहरु आधुनिक बेसमा फयजन भरिएका उत्कृष्ट गायकीका नमुना हुन । संगित दुनियाका विशिष्ट नामहरु उदय —मनिला सोताङकी जेठी छोरी श्रेयालाई घरेलु माहोलको “इम्प्रेशन जति छ इन्फल्याएन्स पनि उत्तिकै छ ।
कतिपय गीतका शब्द÷संगित छान्ने क्रममा द्धिविधा बढेका बेला श्रेया संगितकर्मि बाबु उदयसंग सल्लाह लिने गछिर्न । हाहु र क्षणिकभन्दा पनि अर्थपुर्ण शब्दको छनोट गर्न बाबुले दिने गरेको छ । त्यसमाथि क्लासिकल बेसका संगित राना,धनगोपाल गुरुहरुले दिएको राग—रागिनीको “तत्वबोध” पनि उतिकै छ । अरु नियमित गायकीहरुका बीच तिन बर्ष अधि आएको “पृथ्वी—गित”(अर्थ संङ)को महत्व र पहिचाहन पनि अलग छ । “हामी मानव हौ संसार हाम्रो घर ”बोलको अभय कुमारको शब्दमा श्रेयाले विश्वका चलेका आठ राष्ट्रिसंघीय मान्यताका भाषा (अरबिक, चिनिया,फेन्च,अग्रेजी,रसियन,स्पेनिस) सहितमा स्वर भरेकी छन । कतिपय भाषाको शब्द उच्चारण कसरी गर्ने हो त्यो सम्म पनि थाहा थिएन । श्रेया भन्छिन “अझ चाईनिज शब्दको उच्चारण हेर्न (बुझन) गुगलको सहयोग लिनु परेको थियो ।
कतिपय गीतका शब्द÷संगित छान्ने क्रममा द्धिविधा बढेका बेला श्रेया संगितकर्मि बाबु उदयसंग सल्लाह लिने गछिर्न ।
यतिका बर्षको साधान र सिकाई गित —संगितमा खन्याए पनि यो विधा प्रोफेसन नै बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा श्रेयालाई त्यति द्धिविधा छैन । मेरो बाबुआमाको करियर नै यहि बन्यो प्रोफेसन यहि भयो ।उनि थप्छिन हामी ३ छोराछोरीलाई हुकाउने —पढाउने सहयोगि (गरिख्वाउने अर्थमा) माध्यम संगित बन्यो भने मैले किन द्धिविधा राख्ने र ? वाणिज्यमा स्नाताक श्रेयाको एक जना भाई सुयोग अहिले काठमाण्डौको ब्रिटिस स्कुलमा संगित शिक्षक छन भने उनि एक म्युजिक एरेन्जरस समेत हुन । बहिनी सृष्टी भने ब्याचलरकी विधार्थी हुन ।
अहिले सम्म श्रेयाले झन्डै १ सय गीत गाएकी र रेकर्डमा ल्याईसकेकी छिन । आधुनिक वा पपको यो चिनारी भन्दा अलग “मेरो भ्यालेन्टाइन” “भिसा गर्ल ” “मेरो एउटा साथी छ” “होस्टल —२” लगायतका एक दर्जन भन्दा बढि फिल्मका गीतमा पनि उनले स्वर दिएकी छन । श्रेयाका पोल्छ मुटु बेस्सरी यो छोरीको रुपै राम्रो ,सुस्तरी सुस्तरी कहानी यो प्रेम गीतको जस्ता गीतहरु निकै चल्तीमा छन । उनलाई “लाईभ” गानाबजानाका क्रममा अरुभन्दा पनि श्रोताको भिडबाट आएको “वान्स मोर”को आग्रहले निकै तान्ने गर्दाे रहेछ —एक खालको अपिल जस्तै ।
गित —संगितका नियमित स्टेज शो,युटयब च्यानल अथवा रेकर्डिङको दौडधुपमा पनि श्रेयाले इच्छाएको राम्रो बाटो हो —गितको शब्द चयन । जस्तो उनले उदय सोताङकै शब्द÷संगित
छानेर गाएकी छन ।
दुखाईको सिमा छैन
जहा मिचे नि सन्चो हुदैन
̾̾ ̾ ̾
कहा कहा दुख्छ प्रिय
तिमीलाई के बताउ
छाती चिरी देखाउ कि
मुटुभित्रै लुकाउ कि ?
कान्तिपुर दैनिकमा लेखिएको समाचार छ ।